October 26, 2020 - Achawlaymyar
စိုင်းစိုင်းနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် ပြန်တွဲနေကြပြီလား….သဘောတူတဲ့လူတွေရှိလား
October 26, 2020 by Achawlaymyar
စိုငျးစိုငျးနဲ့ ဝတျမှုံရှရေညျ တို့ ပွနျတှဲနကေပြွီလား ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျောတှထေဲမှာ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျကတော့ အဆိုလောကမှာ အောငျမွငျမှုကို ကွာရှညျစှာထိနျးထားနိုငျတဲ့ ထိပျတနျးရှားရှားပါးပါးအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး အခုခြိနျထိ မိနျးကလေးပရိသတျတှအေရှယျစုံရဲ့အသညျးကြျောပါပဲ။ သူ့ရဲ့အခဈြရေးကတော့ လကျရှိမှာ ခပြွထားခွငျးမရှိခဲ့ပမေယျ့တဈခြိနျကတော့ ပွညျသူခဈြမငျးသမီး ဝတျမှုံရှရေညျနဲ့ ခဈြကွိုကျခဲ့တာဖွဈပွီး အခုခြိနျထိလညျး ပရိသတျတှကေ ပွနျလညျလကျတှဲစခေငျြနကွေတာပါ လှနျခဲ့တဲ့ ၇နှဈက ၂၀၁၃ခုနှဈမှာ လှူဒါနျးမှုတဈခုကိုအတူတူတှဲကာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ပုံရိပျတှဟော စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျရဲ့ Page မှာ တငျထားခဲ့တာဖွဈပွီးဒီနမှေ့ာလညျး ထိုပိုဈ့ဟာပရိသတျတှကွေားမှာ ပွနျလညျရပေနျးစားနတောဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျပွနျတှရေ့နျရှားပါးလှတဲ့ပုံရိပျလေးကို ပရိသတျတှကေတော့ အရမျးကိုသဘောကကြာ မှတျခကျြမြိုးစုံပေးနကွေတာတှရေ့ပါတယျ။ မှတျခကျြတှထေဲကမှ ပွနျတှဲကွဖို့မှတျခကျြတှကေ အမြားဆုံးဖွဈပွီး နုပြိုငယျရှယျလှတဲ့အခြိနျကသူတို့နှဈယောကျရဲ့ပုံရိပျလေးတှဟောလညျး ပရိသတျတှေ မှတျခကျြပေးခငျြစရာပါပဲနျော။ ငယျခဈြတှဖွေဈကွတဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲမငျးသားနဲ့မငျးသမီးကို ပွနျတှဲစခေငျြတဲ့သူတှထေဲမှာ ပရိသတျတှပေါရငျမှတျခကျြပေးခဲ့ပါဦးနျော။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ အခုလိုအဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့ အတှကျ … Read more
”သားအိမျကငျဆာကို ကုသပေးနိုငျတဲ့ သဘာဝဆေး (ရှားစောငျးလကျပကျ)……
အမျိုးသမီးတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါပဲနော်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၅၀ ကျော်လာရင် သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သားအိမ်ကင်ဆာကို ကုသနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်းလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ရတာကလည်း တကယ်ကိုရိုးရှင်းပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်း ရှာရလွယ်တာမို့ ဒီနည်းလမ်းလေးက စာဖတ်သူတွေနဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ။ အစားအသောက်ကိုလည်း အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုပြီး ဗီတာမင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးတွေကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း သစ်ကြားသီးမှုန့် ၅၀၀ ဂရမ် ပျားရည် ၃၀၀ ဂရမ် ရှားစောင်းလက်ပက်အနှစ် ၁၀၀ ဂရမ် ပြင်ဆင်ခြင်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုသေချာရောလိုက်ပြီး မနက်စာစားပြီး မိနစ် ၃၀ လောက်မှာ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းစားပေးပါ။ ရှားစောင်းလက်ပက်ကို အစာအိမ်နာတာ ၊ အမျိုးသမီး မျိုးပွားအင်္ဂါဆိုင်ရာ ရောဂါတွေနဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေအပါအ၀င် ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
ဆွမ်းခံကြွလို့မရတဲ့ဆရာလေးအပါး (၂၀၀) ကျော်ကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး(ရုပ်သံ)
ဆွမ်းခံကြွလို့မရတဲ့ဆရာလေးအပါး (၂၀၀) ကျော်ကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး(ရုပ်သံ) ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးက ကျေးရွာသူလေးတစ်ယောက်ပီပီ ရိုးသားဖြူစင်ပြီး ပွင့်လင်းလှလွန်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးက အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကို မထင်မှတ်ပဲ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အခုဆိုရင် တိုင်းသိပြည်သိ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်ခြား အောင်မြင်မှုတွေများစွာတိုးလာခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးက သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တိုက်၊ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် လူလေးချစ်စရာကောင်းသလို အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ လှူဒါန်းတတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးက ဒီကနေ့မှာတော့ COVID ကာလကြီးမှ ဆွမ်းခံကြွလို့မရတဲ့ ဆရာလေးအပါး (၂၀၀) ကျော်ကို ဖြူဖြူတတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပဲ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့ သူမရဲ့ဗွီယိုဖိုင်လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် Unicode ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဖွူဖွူထှေးက ကြေးရှာသူလေးတဈယောကျပီပီ … Read more
ယောကျြားလေးမြား အမွတျတနိုးယူသငျ့သော မိနျးမ (၁၀) မြိုး
ယောက်ျားလေးများ ယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး (၁). အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့သန့်ရှင်းသော မိန်းမ (၂). မိဘ အား ပြုစုလုပ်ကျွေးလိုစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထက်အကြီးများအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ပြီး…. ကိုယ့်ထက် အငယ်များအား အရာရာနားလည် ထိန်းကျောင်းပေးတတ်သော မိန်းမ… (၃). ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်း ဆို စိတ်မ၀င်စားတတ်..ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်း လက်ထပ်ခြင်း အမှုကို စဉ်းစားဖြစ်သော မိန်းမ…. (၄). အရာရာကို လွယ်လွယ် မယုံ ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်သော မိန်းမ ထို အသိဥာဏ် အတွေ့အကြုံ လောကအမြင်များကိုလဲ သားသမီး များအား သွန်သင် လမ်းညွှန်ပြနိုင်သော မိန်းမ…. (၅). ဟိုးအောက်ဆုံးအဆင့်ကနေ ..ဟိုးအမြင့်ဆုံးအထိ ..ယောကျာ်းဖြစ်သူရဲ့ အလုပ်အကိုင် အဆင့်အတန်း…. ရာထူး … Read more
သူမ ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်နေကျတဲ့ လူတချို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြ လာတဲ့ “ထက်ထက်မိုးဦး”
ထက်ထက်မိုးဦး ဟာ ရွှေစင် ရတနာရွှေဆိုင် ကြော်ငြာကနေ တဆင့် ကေ လးရော၊ လူကြီးပါ မကျန် တခဲနက် အားပေးခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ တစ်ခေတ်တခါ က ကြော်ငြာ ဘုရင်မလေး လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြ တာဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေး တွေက ပရိသတ်ကို အချစ်မလျှော့အောင် အမြဲဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပေါင်းများစွာ၊ တီဗီေ ကြာ်ငြာပေါင်း များစွာ တို့ကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် အကယ်ဒမီများစွာဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးဟာ အိမ်ထောင်ေ ရးမှာကံ မေ ကာင်းခဲ့ပဲ အိမ်ထောင်ဆက်တွေနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာပါ ဒီလို အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းခဲ့တဲ့အပေါ်ထက်ထက်မိုးဦးက အခုလို ပြောပြလာခဲ့တာပါ “ငယ်င ယ်တုန်းကေ တာ့ ကိုမင်းဦးနဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်တွဲခဲ့ အရမ်းချစ် … Read more
ရနျကုနျမွို့က အခွခေံလူတနျးစားတှအေတှကျ ကိုယျတိုငျထှကျပွီး စားသောကျရိက်ခာမြား လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော
အနုပညာလောကမှာ နှဈပေါငျးအတျောကွာ အောငျမွငျစှာနဲ့ ရပျတညျနနေိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ အသကျအရှယျကွီးလာပမေယျ့ တဈနတေ့ဈခွား အောငျမွငျမှုတှေ မြားစှာ ရရှိပိုငျဆိုငျထားသူလေး တဈဦးပါ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ အလနျးစားဖကျရှငျတှကေလညျး ပရိသတျတှေ စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့ကွတဲ့ အရာတဈခုဖွဈပွီး အားပေးမှုကို ရရှိထားတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး သငျဇာဝငျ့ကြျောက အားပေးသူ ပရိသတျအမြားအပွားနဲ့ အနုပညာလောကမှာ ထိပျဆုံးက ရပျတညျနတော ဖွဈပါတယျ။ အမွဲတမျး ခတျေရှပွေ့ေးနပွေီး ခပျဂျေါဂျေါနတေတျတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ မွနျမာလူမြိုးပီပီ အလှူအတနျးမှာလညျး လကျမနှေးသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ အောကျတိုဘာလ (၂၄) ရကျနမှေ့ာလညျး သငျဇာဝငျ့ကြျောက ရနျကုနျမွို့က အခွေံလူတနျးစားတှအေတှကျ ကိုယျတိုငျထှကျပွီး စားသောကျရိက်ခာမြား လှူဒါနျးခဲ့တာကို အခုလိုပဲ တှရေ့ပါတယျ။ သငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ သူမကို လကျဆောငျလာပေးတဲ့ ပစ်စညျးတခြို့တဝကျနဲ့ လိုအပျတာတှကေို ဖွညျ့စှကျခဲ့ပွီး အခွခေံလူတနျးစားမြားအတှကျ … Read more
ကှယျလှနျသူ မီးမီးခဲရဲ့ မိသားစုဝငျမြားမှ မီးမီးခဲ၏ကိုယျခန်ဓာအား နောကျဆုံး နှုတျဆကျ ဆုတောငျးခွငျး မွငျကှငျး
အားလုံး ခဈြရတဲ့ မီးမီးခဲဟာ အောကျတိုဘာလ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ ဘုရားရှငျရဲ့ ရငျခှငျတျောသို့ ပွနျလညျ‌ချေါယူတျောမူခွငျးကို ခံစားခဲ့ရပါတယျ။ ဒီနေ့ အောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာတော့ ကြှနျတျောတို့မိသားစုဝငျမြား သူ့ရဲ့ကိုယျခန်ဓာကို နောကျဆုံး နှုတျဆကျခွငျးနှငျ့အတူ ဆုတောငျးဆကျကပျ အပျနှံခွငျးအစီစဉျကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့မိသားစုရဲ့ ဝမျးနညျးဆုံးအခြိနျမှာ ဆုတောငျးပေးခွငျး၊ အားပေးခွငျးနှငျ့ အဖကျဖကျမှကူညီပေးသောသူမြား….. လာရောကျမတ်ေတာပွပေးသောသူမြားနှငျ့ ပရိသတျမြားအားလုံးကို အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ 🤍 #အယောကျဆီတိုငျးကိုဘုရားရှငျကောငျးခြီးပေးပါစေ🙏 Zawgyi အားလုံး ခဈြရတဲ့ မီးမီးခဲဟာ အောကျတိုဘာလ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ ဘုရားရှငျရဲ့ ရငျခှငျတျောသို့ ပွနျလညျ‌ချေါယူတျောမူခွငျးကို ခံစားခဲ့ရပါတယျ။ ဒီနေ့ အောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာတော့ ကြှနျတျောတို့မိသားစုဝငျမြား သူ့ရဲ့ကိုယျခန်ဓာကို နောကျဆုံး နှုတျဆကျခွငျးနှငျ့အတူ ဆုတောငျးဆကျကပျ အပျနှံခွငျးအစီစဉျကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့မိသားစုရဲ့ ဝမျးနညျးဆုံးအခြိနျမှာ … Read more
ဝေဖန်မှုတွေများလာနေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး နှိုက်ပေးတဲ့ ကံစမ်းမဲ ( ရုပ်သံ )
ဝေဖန်မှုတွေများလာနေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး နှိုက်ပေးတဲ့ ကံစမ်းမဲ ( ရုပ်သံ ) ရောင်းတဲ့ စိန် တွေမှ အားမနာ ပေါက်မဲ ကို လက်နဲ့ဖိ ပြီး ဝယ်ယူသူကို ဂျင်းထည့်ရက်တယ်…ရုပ်သံကိုအောက်ဆုံးမှာတင်ပေးထားပါတယ် စိန်ထည်ပစ္စည်းတွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ရောင်းတဲ့ Facebook Live မှာ မင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦးက ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့ Customer တွေကို လက်ဆောင်တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးခဲ့တာပါ။ အဲလိုကံစမ်းမဲဖောက်တဲ့နေရာမှာ IPad ဆုအတွက် မဲလိပ်နှိုက်တဲ့အချိန် မဲလိပ်တစ်ခုကို ထက်ထက်မိုးဦးက လက်နဲ့ ကပ်ညှပ်ထားတာကို သိသိသာသာမြင်တွေ့လိုက်ကြရတာပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မထက်ကိုချစ်လို့သာ ကြည့်နေရတာလို့ ပရိသတ်တွေကဆိုခဲ့ပြီး ၊ ဒီလို ဂျင်းထည့်တဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ဝေဖန်သံတွေ များသွားခဲ့ပါတယ်။ Unicode ဝဖေနျမှုတှမြေားလာနတေဲ့ ထကျထကျမိုးဦး နှိုကျပေးတဲ့ … Read more
ငယ်ချစ်ဦးနဲ့လွဲခဲ့သူများ မဖတ်ရ …..
ငယ်ချစ်ဦးနဲ့လွဲခဲ့သူများ မဖတ်ရ ….. ကလေးဘဝကိုပြန်လွမ်းမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားတော့ အချစ်ဦးကိုတန်းပြန်သတိရတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘာကောင်ကြီးတွေမှမဟုတ်ပဲ အချစ်ဦးအတွက်ဆို သူရဲကောင်းကြီးအဖြစ်ရှိချင်ခဲ့ကြတယ်။ ကလေးဘဝကိုပြန်သွားတာနဲ့အချစ်ဦးဆိုတာကလည်း ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ အချစ်ဦးလို့သုံးတာက Crush ဆိုတဲ့စကားကိုကလေးဘဝကမသိခဲ့သေးတာရော Crush တယ်ဆိုတာထက်ပြီးမြတ်နိုးခဲ့မိတာကြာင့်ရောပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှစ်သက်ပြီး ပြန်တမ်းတကြတဲ့အဖြူစိမ်းကျောင်းသားဘဝမှာဆို မနက်မိုးလင်းလို့ကျောင်းရောက်တာနဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့လေးနဲ့ကိုယ် ကလေးတို့သဘာဝဆော့မယ် ကစားမယဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်တတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချစ်ဦးဆိုတဲ့ကောင်မလေးက စိန်ပြေးတမ်းကစားနေသလား ကြိုးခုန်နေသလား ဇယ်ခုပ်နေသလားဆိုတာကိုလည်း စိတ်ဝင်တစားလိုက်ကြည့်ခဲ့ကြဖူးမှာပါ။ အခါအခွင့်သင့်တာနဲ့ သူကစားနေတဲ့ ဝိုင်းထဲမှာ ကိုယ်ပါဝင်ခွင့်ရဖို့အသင့်ရှိနေခဲ့ကြဖူးတယ်မလား ကျွန်တော့်အချစ်ဦးဆို သူတအားဆော့တာက အဝတ်ကိုမျက်လုံးမှာစည်းပြီး လက်နဲ့လိုက်ပုတ်တဲ့ကစားနည်း။ အဝတ်စည်းထားတဲ့သူရဲ့ လက်နဲ့ထိမိသူက သူ့နေရာကိုဝင်ယူပြီး နောက်တစ်ယောက်ကိုလိုက်ဖမ်းရတော့တာပဲ။ ကျွန်တော်ဆို သူခွေးရူးဖြစ်တာနဲ့ သူ့အနားသွားအသံပေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွေးရူးအဖြစ်ခံခဲ့ဖူးတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့အဖြူရောင်စည်းဘောင်လေးထဲကနေ သူ့အတွက်အသင့်ရှိနေခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပါတော့၊ ကျောင်းပထမဆုံးဖွင့်ရက် အတန်းပိုင်ဆရာမကအသင်းတွေခွဲတဲ့အခါ သူနဲ့အသင်းတူတူကျဖို့လည်း ကျွန်တော်တော့ အမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။အချစ်ဦးနဲ့အသင်းအတူတူဖြစ်ရတဲ့အခါ ရတဲ့အခွင့်ရေးက နည်းမှ မနည်းပဲဗျ။ … Read more
မွေးရာပါ ချမ်းသာဖို့ ဇာတာပါတဲ့ ရာသီခွင်များကိုပြောရရင်
မွေးရာပါ ချမ်းသာဖို့ ဇာတာပါတဲ့ ရာသီခွင်များကိုပြောရရင်… တကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာ လေဓာတ် ရာသီခွင် (မေထုန်၊ တူ၊ ကုမ်) မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ် ဆိုရင် သူဋ္ဌေးကြီး ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများတယ်လို့ မှတ်ယူ လိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ကမ္ဘာပေါ်က အချမ်းသာဆုံး ဘီလျံနာသူဌေးကြီးတွေ စာရင်းကို ထုတ်ပြန် ပေးနေကျ Forbes စာစောင်ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ဒီနှစ် ၂၀၂၀ ရဲ့ ထိပ်တန်းဘီလျံနာ (၁၀၀) စာရင်းမှာ လေဓာတ်ရာသီဖွားတွေက အများဆုံး လွှမ်းမိုး ထားလို့ပါပဲ။ လေဓာတ် ရာသီခွင်ဖွားတွေရဲ့ နောက်မှာ မြေဓာတ်ရာသီဖွား (ပြိဿ၊ ကန်၊ မကာရ) တွေက ဒုတိယ အများဆုံး ဖြစ်နေပြီး အဲဒီနောက်မှာတော့ … Read more
ACHAWLAYMYAR provide celebrity, life style,breaking news, local news and International news.Articles are displayed in tex,video and photos.Vistors can read news in articles type of categories in https://achawlaymyar.com/ (example - News, Entertainment,Sport, Health, Celebrity, Media &Music ...etc). Hope our vistors enjoy our website.
© 2020 Achawlaymyar • Built with GeneratePress